Grunwaldzka IV amagumbi - I-Airbnb
Grunwaldzka IV amagumbi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguPerfect
Umoya weDolophu endala ezandleni zakho.
Indawo yethu ibekwe kwisitrato esisemdeni wokungena kwi-Olsztyn Old Town. Ngokumalunga ne-150 m ukusuka kwisakhiwo, kukho indawo yokungena kwi-Olsztyn Old Town ngokusebenzisa ibhulorho ephezu koMlambo i-Łyna, ojikeleze iziko kunye neDolophu endala yase-Olsztyn. Enye yezona ndawo zintle kwiDolophu endala, iimbono ezintle zepaki kunye nedolophu endala. Amagumbi ethu e studio anekhitshi, indawo yokuphumla kunye negumbi lokuhlambela, kwaye indawo yabo imalunga ne-20m2.
IZIXHOBO: i-sofa enezihlalo ezi-2 (indawo yokulala i-140x200), i-wardrobe eyakhelwe ngaphakathi, i-LCD TV kunye nomsebenzi we-Smart TV (i-Netflix - i-Youtube, ...), isifuba sedrowa, idesika, isitulo esi-1, iKitchenette yokulala. : yoqheliso isitovu, ifriji, i-onti, iketile, iipleyiti, iiglasi, iikomityi, iimbiza, neepani, baza ke amacephe. Kwigumbi lokuhlambela: ishawa, indlu yangasese, isitya sokuhlambela, isipili, iwasher-dryer, isomisi seenwele, iitawuli. Ukufikelela kwi-Intanethi nge-WiFi. Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka kwintendelezo yesakhiwo - nangona kunjalo, njengoko kunjalo kwindawo ekufutshane neDolophu yonke eNdala, ukufumaneka kuncinci. Ezinye iindawo zokupaka "iSixeko" ziyafumaneka ecaleni kwesakhiwo esisecaleni kwendlela. Ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu (i-8 ukuya kwi-5 ntambama), intlawulo ihlawuliswa ngokuhambelana noluhlu lwexabiso loMmandla.
I-Apartamenty Grunwaldzka idibene ngokugqibeleleyo. Isikhululo sebhasi esikufutshane sikwi-150 yeemitha kude. Lo mhlaba uziimitha ezingama-700 ukusuka kwiSikhululo sikaloliwe saseWest kunye neekhilomitha ezi-4 ukusuka kwiSikhululo sikaLoliwe esiPhambili. Isikhululo seenqwelomoya saseOlsztyn-Mazury sikumgama oziikhilomitha ezingama-45. Zininzi iibhari, ii-pubs kunye neendawo zokutyela kufutshane. Ngexesha lasehlotyeni, iindawo ezininzi ezikhangayo, iikonsathi kwiDolophu endala, kumgama omalunga ne-3.5 km, kukho i-City Beach ephumelele ibhaso-indawo egqibeleleyo yokulibala malunga namaxhala obomi bemihla ngemihla, elele entlabathi, ephulaphule. isandi samaza nokuntyiloza kweentaka. Kukho, ewe, uninzi lwezinye iindawo ezinomdla, ezinje ngeOlsztyn Castle, iPlanetarium, Theatre, Philharmonic, Arboretum eKudypy (malunga neekhilomitha ezi-6) kunye neMazury Golf & Country Club (malunga neekhilomitha ezili-10)
Umbuki zindwendwe ngu- Perfect
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, bhalela kwidilesi yethu ye-imeyile okanye usitsalele umnxeba
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Olsztyn